Runtii waa la Sameeyay, Kaniisadda Caalamiga ah ee God Switzerland (WKG)
Ciise ayaa cadeymo muuqaal ah oo ku saabsan Qorniinka u diray koox ka mid ah hoggaamiyeyaasha Yuhuudda ee silcin isaga: "Qorniinka ayaa ii tilmaamaya" (Yooxanaa 5,39 Tarjumaadda New Geneva). Sannado ka dib, runtan waxaa xaqiijiyey malaa'igtii Rabbiga oo ku dhawaaqday: "Wixii farriinta nebiyada ee Ruuxa Ilaah bixiyaa waa farriinta Ciise" (Muujintii 19,10 Tarjumaadda New Geneva).
Macbudkii ku yaal Yeruusaalem runtii waa mid qurux badan. Taariikhyahan Yuhuudi ah iyo aqoonyahan Flavius ​​Josephus ayaa qoray: «Wejiga cad ee cad ee dhalaalaya waxaa lagu sharraxay dahab iyo qurux cabsi badan. Waxay maqleen wax sii sheegidda Ciise ee ah in macbudkan quruxda badan, oo ah xarunta cibaadada ee ku hoos jirta axdigii hore, in gebi ahaanba la burburin doono. Burburinta u leh qorshaha badbaadada ee aadanaha oo dhan waxaa lagu fuliyaa waqtiga saxda ah la'aanteed macbudkan. Waa yaabe iyo maxay naxdin ku noqotay dadka.
Ciise muu cadayn gaar ahaan macbudka ku yaal Yeruusaalem sabab ahaan. Wuxuu ogaa in ammaanta Ilaah aan laga gudbi karin dhismo uu qofku sameeyay, in kasta oo ay weynaato. Ciise wuxuu xertiisii ​​u sheegay in macbudkii la beddeli doono. Macbudkii mar dambe uma adeegi jirin ujeedkii loo dhisay. Ciise ayaa sharraxay: «Qorniinku miyaanu odhan: Gurigeygu waa inuu ahaado guriga tukashada oo dhan? Laakiin waxaad ka samaysatay god tuugo. (Mark 11,17 tarjumaadda New Geneva).
Sidoo kale aqri waxa ku qoran Injiilka Matthew ee ku saabsan: «Ciise wuxuu ka baxay macbudka wuuna socday inuu baxo. Markaas xertiisii ​​ayaa u timid oo ka warraysay haybadda macbudka. Waxaas oo dhan ayaa adiga kaa yaabinaya, miyaanay ahayn? wuxuu yidhi Ciise. Laakiin waxaan idinku leeyahay, Halkan lagu dul dayn maayo dhagax kale; wax walba waa la baabi'in doonaa » (Matayos 24,1: 2-21,6, Luukos tarjumaadda New Geneva).
Fiiro u yeelo waxa Luukos ka warramayo: «Markuu Ciise u soo dhowaaday magaalada oo uu arkay meel ku taal hortiisa, wuu ooyay oo ku yidhi: Haddii aad maanta aqoonsan lahayd maxaa nabad kuu keeni lahaa! Laakiin hadda waa lagaa qariyey, adigu ma aragtid. Wakhtigaagu waa ku soo socdaa, markii cadaawayaashaadu derbi kugu dhufan doonaan, oo ay hareereeyaan oo ay dhinac walba kaa riixin doonaan. Way ku burburin doonaan oo burburin doonaan carruurta adiga kugu dhex jirta, oo dhagaxna ugama tegi doonaan magaalada dhexdeeda, maxaa yeelay, ma aad aqoonsan wakhtigii Ilaah kugula kulmay (Lukos 19,41: 44) New Geneva Tarjumaad).
Fadlan aqri waxa Lukoos ka warbixinaya: «Dad aad u tiro badan ayaa raacay Ciise, oo ay ku jiraan haween fara badan oo aad u gunuusay oo u ooyay isaga. Laakiin Ciise intuu u soo jeestay, wuxuu ku yidhi, Gabdhaha reer Yeruusaalemow, ha ii ooyin. Ku oofi naftaada iyo carruurtaada! Sababtoo ah waxaa jira wakhti qofku odhan doono: Waxaa barakaysan dumarka naagaha jilicsan oo aan weligood ilmo dhalin! Oo markaasaa mid buuraha ku odhan doonaa, Nagu soo dhaca. Buurahana waxay ku odhan doonaan, Nagu aaso. (Luukos 23,27: 30 Tarjumaadda New Geneva).
Markuu Ciise ku qayliyay iskutallaabta dusheeda, "waa la dhammaystiray," looma jeedin oo keliya dhammaystirka shaqadiisa dib u heshiisiinta ee badbaadada, laakiin sidoo kale wuxuu sheegay in axdigii hore (Qaab nololeedkii reer binu Israa'iil iyo caabidnimadii sharciga Muuse) ayaa fuliyay ujeeddadii Ilaah isaga uumay. Dhimashadii Ciise, sarakiciddiisa, u dabbaaldegaan iyo u adeegidda Ruuxa Quduuska ah, Ilaah gudaha iyo xagga Masiixa iyo xagga Ruuxa Quduuska ah ayaa dhammaystiray shaqadii dib u heshiisiinta aadanaha oo dhan isaga. Hadda waxaa yimid wixii nebi Yeremyaah uu saadaaliyay: "Bal eega, waxaa soo socda wakhtigii Rabbigu leeyahay, oo anigu axdi cusub baan la dhigan doonaa reer Israa'iil iyo reer Yahuudah, mana ahaan doono sidii axdigii aan la dhigan jiray, Oo markaan iyaga gacanta qabtay inaan ka kaxeeyo dalka Masar, Aabbayaashu waxay axdi ku galeen axdigii ay dhawri jireen, in kastoo aan iyaga sayid ahay, ayaa Sayidka Rabbiga ahu leeyahay. Laakiin kanu waa axdiga aan la dhigan doono reer Israa'iil wakhtigaas dabadood, ayaa Rabbigu leeyahay. Sharcigayga waxaan gelin doonaa qalbigooda, oo waxay ku qori doonaan maankooda, oo iyana waxay noqon doonaan dadkayga anna waxaan noqon doonaa Ilaahooda. Oo Rabbigu wuxuu leeyahay, Midkoodna ma bari doono mid kale, ama walaalkiis midka kale, oo dheh, Rabbiga garo, laakiinse kulligood way wada aqoonsan doonaan, ayaa Rabbigu leeyahay. maxaa yeelay waxaan doonayaa inaan iyaga cafiyo xumaantooda oo aanan waligood dembigooda soo xusuusin » (Yeremyaah 31,31-34).
Erayadii "Waa la dhammeeyey," Ciise wuxuu ku dhawaaqay injiilka ku saabsan aasaaska axdiga cusub. Wixii hore waa la soo maray, kan cusub ayaa noqday. Dembigu waa lagu qodbay iskutallaabta oo nimcadii Ilaah ayaa noo timid iyada oo ficilkii dib u heshiisiinta ee Masiixa lagu sameeyay, kaas oo u saamaxay shaqadii weynayd ee Qudduusku in ay cusboonaysiiso qalbiyadeena iyo maskaxdeena. Isbedelkani wuxuu noo oggolaanayaa inaan kaqaybqaadano dabeecadda aadanaha ee uu cusboonaysiiyay Ciise Masiix. Wixii lagu ballamay oo lagu muujiyey axdigii hore ayaa lagu rumeeyey Masiixa Axdiga Cusub.
Sidii rasuul Bawlos u baray, Masiixu (axdigii cusbaa ee loo qoondeeyay shakhsiga) ayaa noo gaadhay waxa sharciga Muuse leeyahay (axdigii hore) wuu awoodi waayey oo waa inuusan awoodin. «Gabo gabo maxaan ka qaadan karnaa tan? Dadka aan ka tirsanayn dadka Yuhuudda ah wuxuu xaq u noqday Ilaah hortiis isagoo aan isku dayin inuu sidaas sameeyo. Waxay xaqnimo ku heleen rumaysad. Israel, dhanka kale, dadaalkeeda oo dhan inay u hogaansanto sharciga sidaasna lagu gaaro cadaalad ma aysan gaarin hadafkii sharciga quseeya. Maxaa diidaya? Sababtoo ah aasaaska ay ku dhiseen waxay ahaayeen aaminaad; waxay u maleeyeen inay hadafkooda ku gaari karaan dadaalkooda. Caqabada ay la kulmeen waxay ahayd "xayiraad" (Rooma 9,30-32 Tarjumaadda New Geneva).
Farrisiintii waqtiga Ciise iyo rumaystayaashii ka yimid diinta Yahuudda waxaa saameyn ku yeeshay mowqifkooda sharciga ah ee waqtiga Rasuul Bawlos isla weynaanta iyo dembiga. Waxay u qaateen in dadaalkooda diimeed ay ku heli karaan waxa kaliya ee Eebbe qudhiisa inoogu sameyn karo nimco, ciise iyo ciise. Ujeeddadaada sida uu yahay axdigii hore (ku saleysan caddaaladda warshadda) waxay ahayd been abuur ay ka timid xoogga dembiga. Dhab ahaan nimcadii iyo rumaysadkii axdiga hore ma jirin, laakiinse sidii Ilaah horeba u ogaa, reer binu Israa'iil nimcadan way ka leexan doonaan.
Si loo muujiyo muhiimada weyn ee waxa ka dhacay iskutallaabta dusheeda ee Calvary, wax yar ka dib markuu Ciise qayliyey, "Way dhamaatay", magaalada Yeruusaalem waxaa ruxay dhulgariir. Jiritaanka bani’aadamka aasaas ahaan wuu is beddelay wuxuuna horseeday dhammaystirka waxsii sheegyada ku saabsan burburka Yeruusaalem iyo macbudka iyo abuuritaanka axdiga cusub:
Markuu Ciise ku qayliyey ereyada "waa la dhammaystiray", wuxuu caddeeyey dhammaadka joogitaanka Ilaah ee macbudka binu-aadmiga, ee ah "Kan Quduuska ah". Waraaqdihiisii ​​uu u diray Korintos, Bawlos wuxuu ku qoray in Ilaah hadda ku nool yahay macbud aan jidh ahaan ahayn, oo uu u qaabeeyey Ruuxa Quduuska ah:
Miyaanaydin garanaynin inaad tihiin macbudkii Ilaah oo uu Ruuxa Ilaah idinku dhex jiro? Ku alla kii macbudka Ilaah dumiya, wuu burburin doonaa, maxaa yeelay, isagu xukun buu ku soo dejiyaa isaga. Maxaa yeelay, macbudka Ilaah waa qoduus, oo adna waxaad tahay macbudkan quduuska ah (1 Korintos 3,16-17, 2. 6,16 Korintos Tarjumaadda New Geneva).
Rasuul Bawlos sidan ayuu u dhigay: “Kaalay isaga! Waa dhagaxii nool ee ay bini aadamku caddeeyeen inaan la qaadan karin, laakiin taas oo Ilaah isagu doortay oo uu indhihiisa ku qiimeeyo. Naftaada ha lagu geliyo sidii dhagaxyo nool, oo Ilaah dhisay oo Ruuxiisa ka buuxay. Nafsaddaada ha loogu dhiso wadaaddo quduus ah si aad allabari ugu bixisid allabari uu Ruuxiisa ku bixiyey - allabaryada uu ku farxo maxaa yeelay waxay ku saleysan yihiin shaqada Ciise Masiix. Laakiin idinku waxaad tihiin dadkii Ilaah doortay. Waxaad tihiin wadaadnimo boqornimadii, quruun quduus ah, iyo dad isaga keli u ah, oo waxaa ku waajib ah inuu ku naadiyo falimihiisa waaweyn, camalladii kii gudcurka idiinka yeedhay gudcurka sinu iftiinkiisa yaabka leh. (1. Petr. 2,4-5 iyo 9 Tarjumaadda New Geneva).